Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Si Ku Meelgaadh Ah Xayiraad Ugu Soo Rogtay Telefishanka Universal Ee Laga Leeyahay Somalia | Araweelo News Network (Archive) -
Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Si Ku Meelgaadh Ah Xayiraad Ugu Soo Rogtay Telefishanka Universal Ee Laga Leeyahay Somalia
Hargeysa(ANN) Wasaaradda Warfaafinta Somaliland ayaa hakisay hawlihii baahinta Telefishnka UNIVERSAL ee dhinaca Somaliland. sidaana waxa lagu sheegay qoraal kasoo baxay caweyskii caawa xafiiska Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo wacyigelinta
Somaliland Cabdilaahi Cismaan Jaamac (Geel-jire).
Xayiraada Wasiirka Warfaafintu Telefiishanka Universal kaga joojiyay shaqadii baahinta wararka dhinaca Somaliland iyo gebi ahaanba shaqadii wuxuu ku sababeeyey. kadib markii sida uu ku eedeeyay ay ixtiraami waayeen shuruucda caalamiga ah ee saxaafada iyo shuruucda Somaliland, isla markaana si dhexdhexaadnimo ah u gudan waayeen hawshoodii warbaahineed. sidoo kalena ay ka dhega adaygeen inay qabtaan telefoonada wasaaradda warfaafinta Somaliland.
“Waxaan idin la socodsiinayaa inay wasaaradda warfaafintu si ku meel-gaadha, u joojisay dhamaan wixii la xidhiidhay hawlaha warbaahineed ee aad ka sameyn jirteen Jamhuuriyada Somaliland. Kadib markii aad si dhex dhexaadnimo ah u gudan waydeen waajibaadkiini warbaahineed.”ayuu ku yidhi Wasiirku qoraalkiisa.
wasiirku wuxuu ku eedeeyay shaqaalaha UNIVERSAL inay ka maarmeen wada shaqaynta ka dhaxaysay, isagoo qoraalka ku yidhi, “Markii aad ka maaranteen xidhiidhka wada shaqeynayd ee inaga dhaxeeya. Markii aad si cadaana masuuliyiinta wasaarada (Warfaafinta) uga qaban weydeen Tilifoonka. Markii aad ka gaabiseen inaad ku dhaqantaan xeerka saxaafada caalamiga ah iyo kan Somaliland-ba, caadana ka dhigateen inaad dhinac kaliya wax u baahisaan.
Waxaanu go’aansanay inaanu si kumeel-gaadha la idiinka joojiyo hawlihii warbaahineed ee aad ka wadeen dhamaan jamhuuriyada Somaliland laga bilaabo taariikhda maanta 5 October 2010.Hay’adaha Sharciga iyo Wasaarada arrimaha gudaha Somaliland waxaan ka codsanayaa in go’aankaasi fulintiisa iyo dabagalkiisa aad ku sameysaan” ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland.